Farmaajo oo loo diyaariyey Guri ku yaalla Qeybta Mucaaradka ka degan yihiin Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Farmaajo oo loo diyaariyey Guri ku yaalla Qeybta Mucaaradka ka degan yihiin Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynihii hore Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku jira xilligii ugu danbeeyay ee u banneynayo Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya oo muddo ka badan shan sano uu ku noolaa.
Farmaajo oo 15-kii bishan May, 2022 looga adkaaday doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Isniinta la filayaa inuu xilka wareejiyo, waxaana loo diyaariyey Guri ku yaalla. agagaarka Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo ah aaggii ay hore u deganaayeen siyaasiyiinta mucaaradka ee ka horjeeday maamulkiisa.
Guriga Farmaajo loo diyaariyey ayaa hore waxaa u kireystay Madaxweyaha Galmudug Axmed Qoorqoor, waxaana halkaasi ka socday ololaha dib u doorashada Farmaajo, kaasoo uu hoggaaminayey Fahad Yaasiin.
Kadib 22-ka bishan May 2022 waxaa Maxamed C/llaahi Farmaajo u bilaabanaya nolosha mucaaradnimada, kadib halgan dheer oo loo galay sidii looga saari lahaa Villa Somaliya, sanad iyo dheeraad uu sharci darro ku joogay.
Previous articleSomaliland oo lagu qabtay Nin Mucaarad ku ah Madaxweynaha Jabuuti iyo Cabsi laga qabo…
Next articleTaageerayaashii Farmaajo ee Baraha Bulshada oo weji cusub oo naxdin leh lasoo baxay